၂၀၂၀ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ သီခငျြး (၈) ပုဒျ။ – SoShwe
Home/Entertainment/၂၀၂၀ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ သီခငျြး (၈) ပုဒျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈအစောပိုငျးမှာပဲ လူကွိုကျမြားခဲ့တဲ့ သီခငျြး (၈) ပုဒျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈရဲ့ အစောပိုငျးကာလပဲ ရှိသေးပမေယျ့ ဟောလီဝုဒျအဆိုတျောတှကေတော့ ၂၀၂၀ ခုနှဈအတှငျး အကောငျးဆုံးသောသီခငျြးတှကေို ပရိသတျတှအေတှကျ သီဆိုပေးထားလိုကျပါပွီနျော။ သီခငျြးခဈြသူတှအေနနေဲ့ အောကျမှာ ဖျောပွထားပေးတဲ့ သီခငျြးတှကေို နားမထောငျရသေးဘူးဆိုရငျတော့ နားထောငျကွညျ့ဖို့ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။
၁။ မတျမတျ Halsey ရဲ့ “You Should Be Sad”ဆိုတဲ့ သီခငျြးလေး။
၂။ Selena Gomez ရဲ့ မကွာသေးခငျကမှထှကျရှိထားတဲ့ သီခငျြးအယျလျဘမျ “Rare” ထဲက လူကွိုကျမြားတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျဖွဈတဲ့ “People You Know” . . .
၃။ Mac Miller သီဆိုထားတဲ့ “Good News” လို့အမညျရတဲ့ အေးဆေးငွိမျ့ညောငျးတဲ့ သီခငျြးသဈ။
၄။ တကျသဈစအဆိုတျော Doja Cat ရဲ့ “Boss Bitch” . . .
၅။ Khalid ရဲ့ ကိုယျဘာဖွဈခငျြလဲဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ သူတှနေားထောငျသငျ့တဲ့ “Know Your Worth” . . .
၆။ Jonas Brothers သုံးဦးလုံးပါဝငျသီဆိုထားတဲ့ “What A Man Gotta Do” ဆိုတဲ့ သီခငျြးသဈ။
၇။ စိတျသဘောထားပွညျ့ဝတဲ့သူတှကေို အသိအမှတျပွု သီဆိုထားတဲ့ “Intentions” လို့အမညျပေးထားတဲ့ Justin Bieber ရဲ့သီခငျြးသဈ။
၈။ John Legend ရဲ့ “Conversation In The Dark” လို့ အမညျရတဲ့ သီခငျြးသဈ။
အထကျမှာဖျောပွပေးခဲ့တာတှကေတော့ ကမ်ဘာကြျောဟောလီဝုဒျအဆိုတျောတှရေဲ့ ယခုလကျရှိမှာ လူကွိုကျမြားတဲ့ သီခငျြးသဈတှပေဲဖွဈပါတယျ။ အဆိုတျောတှဟောလညျး သာမနျလူသားမြားနညျးတူ အသှေးအသားနဲ့ တညျဆောကျထားတဲ့ လူသားတှပေဲဖွဈတာကွောငျ့ အဆိုတျောတှရေဲ့ခံစားခကျြတှကေ လူအမြားရဲ့ခံစားခကျြနဲ့ တူနလေရှေိ့ပါတယျ။ ဒီတော့ အထကျမှာဖျောပွထားတဲ့သီခငျြးတှကေ ဘာကွောငျ့လူကွိုကျမြားရလဲဆိုတော့ အဆိုတျောတဈဦးခငျြးစီက သူတို့ရဲ့စဈမှနျတဲ့ ကိုယျပိုငျခံစားခကျြတှကေို သီခငျြးစာသားအဖွဈရေးသားပွီး သီဆိုထားတာကွောငျ့ပဲဖွဈပါတယျ။
၂၀၂၀ ခုနှစ်အစောပိုင်းမှာပဲ လူကြိုက်များခဲ့တဲ့ သီချင်း (၈) ပုဒ်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ အစောပိုင်းကာလပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဟောလီဝုဒ်အဆိုတော်တွေကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်းဆုံးသောသီချင်းတွေကို ပရိသတ်တွေအတွက် သီဆိုပေးထားလိုက်ပါပြီနော်။ သီချင်းချစ်သူတွေအနေနဲ့ အောက်မှာ ဖော်ပြထားပေးတဲ့ သီချင်းတွေကို နားမထောင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ နားထောင်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
၁။ မတ်မတ် Halsey ရဲ့ “You Should Be Sad”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး။
၂။ Selena Gomez ရဲ့ မကြာသေးခင်ကမှထွက်ရှိထားတဲ့ သီချင်းအယ်လ်ဘမ် “Rare” ထဲက လူကြိုက်များတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “People You Know” . . .
၃။ Mac Miller သီဆိုထားတဲ့ “Good News” လို့အမည်ရတဲ့ အေးဆေးငြိမ့်ညောင်းတဲ့ သီချင်းသစ်။
၄။ တက်သစ်စအဆိုတော် Doja Cat ရဲ့ “Boss Bitch” . . .
၅။ Khalid ရဲ့ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ သူတွေနားထောင်သင့်တဲ့ “Know Your Worth” . . .
၆။ Jonas Brothers သုံးဦးလုံးပါဝင်သီဆိုထားတဲ့ “What A Man Gotta Do” ဆိုတဲ့ သီချင်းသစ်။
၇။ စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့သူတွေကို အသိအမှတ်ပြု သီဆိုထားတဲ့ “Intentions” လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Justin Bieber ရဲ့သီချင်းသစ်။
၈။ John Legend ရဲ့ “Conversation In The Dark” လို့ အမည်ရတဲ့ သီချင်းသစ်။
အထက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တာတွေကတော့ ကမ္ဘာကျော်ဟောလီဝုဒ်အဆိုတော်တွေရဲ့ ယခုလက်ရှိမှာ လူကြိုက်များတဲ့ သီချင်းသစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုတော်တွေဟာလည်း သာမန်လူသားများနည်းတူ အသွေးအသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ လူသားတွေပဲဖြစ်တာကြောင့် အဆိုတော်တွေရဲ့ခံစားချက်တွေက လူအများရဲ့ခံစားချက်နဲ့ တူနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သီချင်းတွေက ဘာကြောင့်လူကြိုက်များရလဲဆိုတော့ အဆိုတော်တစ်ဦးချင်းစီက သူတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို သီချင်းစာသားအဖြစ်ရေးသားပြီး သီဆိုထားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous Coronavirus နဲ့ တက်ကသိုလျ/ကောလိပျတှရေဲ့အခွအေနေ။
Next ၂၀၁၉ ခုနှဈရဲ့ အကြျောကွားဆုံးအဆိုတျော။